Ilhaan oo dalab u dirtay shacabka Israa'iil xilli Netanyahu uu wajahaya doorasho adag - Jigjiga Online
HomeSomalidaIlhaan oo dalab u dirtay shacabka Israa’iil xilli Netanyahu uu wajahaya doorasho adag
Ilhaan oo dalab u dirtay shacabka Israa’iil xilli Netanyahu uu wajahaya doorasho adag
Washington (JigjigaOnline) – Xildhibaanka Aqalka Congress-ka Maraykanka, Ilhaan Cumar, ayaa dadka reer Israa’iil ugu baaqday in ay ka codeeyaan Ra’isulwasaaraha dalkaas Benjamin Netanyahu oo wajahaya doorasho si adag loogu loolami doono.
Ilhaan ayaa hadalkan ka sheegtay waraysi ay siisay taleefishinka CBS.
Israa’iil waxaa ka dhacaysa doorasho muddo 5 bilood gudahood ah, taas oo uu musharixiinta u taagan ka mid yahay Ra’isulwasaaraha hadda xilka haya, Netanyahu iyo musharrixiin kale.
Doorashadan ayaa la qabanayaa ka dib markii uu ku guuldareystay doorashadii April ee uu ku waayay codka aqlabiyadda ee xukuumad uu ku soo dhisi lahaa.
“Waxaan hubaa in shacabka Israa’iil ay samayn doonaan go’aan kuwii hore ka duwan, waxaanan u malaynayaa in ay fahmi doonaan jiritaankiisa iyo siyaasadihiisa in ay yihiin kuwa is burinaya, kana hor imanaya nabadda,” ayay waraysiga ku tiri Ilhaan Cumar.
“Dhul kale oo laga qaato Falastiin wuxuu sii xumeynayaa xaaladda wadahadallada”, ayey tiri Ilhaan oo ka jawaabeysay su’aal laga weydiiyay ballanqaadkii dhowaan ee Netanyahu uu ku sheegay in uu ku balaarin doono xuduudaha Israa’iil.
Waxay sheegtay in sida kaliya ee lagu cadaadin karo Israa’iil, looguna qasbi karo tubta nabadda in ay tahay in “aanan la maalgashan iyo in la mamnuuco iibsiga nadeecooyinkooda”.
Bishii la soo dhaafay, Ilhaan ayaa loo diiday in ay gasho Israa’iil, waxayna tan timid ka dib markii madaxweyne Trump uu degelgiisa Twitter-ka ku qoray in ay tahay astaan daciifnimo haddii Israa’iil ogolaato in ay Ilhaan gasho dalkaas.
Dagaalka adag ee Netanyahu uu ka wajahayo doorashada ku celiska ah
Dadka Israa’iil ayaa shan bilood gudahood codkooda ka dhiiban doona doorashada guud ee ku celiska ah.
Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dalbaday doorasho waqtigeeda laga soo horumariyay markii uu ku guuldareystay inuu helo codad ku filan, doorashadii April.
Qiimeyntii ugu dambeysay ee la sameeyay, wuxuu xisbigiisa Likud oo loollan adag ka wajahayaa xisbiga caqabadda ku ah ee Buluugga iyo Caddaanka ee uu hoggaaminayo madixii hore ee militariga Benny Gantz.
Xisbiyada yaryar ayaa haddaba kaalin weyn ku yeelan doono natiijada ugu dambeysay.
Ka dib doorashada, waxaa billaaban doona wadahadallada lagu dhisayo isbaheysiyo iska soo horjeeda, taas oo suuragal ay tahay in Netanyahu uu caqabad kala kulmo.
Doorashadii hore maxaa dhacay?
Labada xisbi ee Likud iyo Blue and White waxay heleen min 35 kursi oo ka tirsan kuraasta 120 ah ee baarlamaanka.
Waxaa la shaaciyay in Mr Netanyahu uu guuleystay, waxayna u muuqatay in uu awoodda dhisidda isbeheysi uu la galo axsaabta yaryar iyo kuwa diimaha.
Balse iskudeyo dhicisoobay oo isbuucyo socday ka dib, wuxuu ku guuldareystay inuu helo isbeheysi.
Dhibaatadii ugu dambeysay ee uu Netanyahu la kulmay waxay ahayd, kala xulashada arrimo isasaaran oo xasaasi ah si uu dowlad u dhisto, taas waxaa daciifiyay eedaha uu wajahayo ee la xiriira laaluush, wax isdabamarin iyo ku xadgudbidda aaminaadda shacabka isagoo wajahayo seddax kiis oo musuqmaasuq, oo dhageysigii ugu dambeeyay ee maxkamadda la filayo.
Mr Netanyahu wuu diiday inuu khalad sameeyay. Wuxuu sidoo kale beeniyay in uu raadinayo xasaanad baarlamaan, si uu xilka usii hayo.
Wasladda DAHABKA Ah Ee Dawladda Deegaanka Soomaalida, Dooddiisu Waa Gar!
“Muddo Korodhsi Dalkan Kama Dhici Karo” – Madaxweynaha Puntland Oo Digniin U Diray Farmaajo